Ellis Zindi osumudzira shirikadzi, vakaremara nenherera kuti vagone kuzviriritira – Ntu News
August 24, 2021 August 24, 2021 Jasmin Rose	0 Comments
MUDZIMAI ANOBVA ku Mutasa South muzvare Ellis Zindi arikuita mabasa okusumudzira shirikadzi, nherera nevakaremara kuti vagone kuzviriritira kumusha kwaakazvarirwa nharaunda ye Mutasa South pamwe chete nekutarira vakwegura achishandisa zvirikubva muhomwe yake.
“Ndichangotanga mabasa aya asi nepashoma pandinowana munharaunda (constituency) ndava nemabhekari makumi mashanu ne matanhatu emabhanzi (56 bakeries for buns), muriwo wakamirira kubatsira vakwegura, vakaremara, ndufu ne nherera kuti vabatsirike (horticulture projects to support the elderly, orphans, funerals and people with disabilities).
“Ndine zvikwata gumi neshanu varikuchengeta have dzandakatenga nechikafu chacho dzava kutotengeswa, zvose izvi ndiri kuita ndichishandisa mari yangu.” (15 chicken project groups).
Parizvino mwana we province yeManicaland Zindi agadzira mabasa kuti vasina zvekuita munharaunda vawane kubatsirika uyezve ari kutarisira kuwedzera mikana yemabasa kuburikidza nebasa raari kubata.
“Parizvino ndapinza mabasa makumi matatu nematatu mumakambani akasiyana (33 jobs that l created so far in my different projects).
“Ndinovadzidzisa kugadzira sipo, mishonga yemuzvimbuzi neye kusukisa ndiro, mafuta ekuzora pamwe chete ne sipo yakatsetseka yekuwachisa.” (I am teaching them to make dish washer, toilet cleaner, soap, vaseline and surf.)
Achitsanangura zvaari kuita izvi mudzimai uyu anoti anoshandisa mari yake yemuhomwe isiri kunyatsosvika paari kuda uyezve arikukumbira rubatsiro kune vakasununguka kuti vane matambudziko ehurema vagone kuwana zvinobetsera pakufamba kwavanoita.
“Ndiri kushandisa mari yangu asi chishuwo changu ndechekuti dai ndakwanisa kuwana rubatsiro kubva kwakasiyana siyana kuti vakaremara vawane ma wiricheya nezvimwe zvavanoshandisa pakubatsirika kufamba uyezve kune vaye vasingakwanise kuzvitira kuburikidza nekuremara kwavanenge vakaita ndiri kushuwira kuti mwedzi woga woga vawane chikafu, parizvino ndine vandiri kuitira izvi asi nekuda kwekuti vakawandisa ndirikutsvaga rubatsiro rwekuti basa iri rirambe richienderera mberi nekuti ndinobatikana nekutambura kwevanhu venharaunda yandinobva,” akadero muzvare Zindi achitaura nepepa nhau rino re NTU News Zimbabwe.
Zvimwe zvezviri kuronga kuitwa na Ellis Zindi munharaunda make kuwona kuti panodarika nevanhu pose pakagadzirisika kuitira kuti vagone kurerukirwa mukufambisa mabasa avo.
“Ndiri kuda kuitisa ma foot bridge ayo andiri kutogadzirisa kuti avepo vanhu vawane kubatsirika pakufamba nekutakura zvirimwa zvavo kuenda kuzvigayo nekutenga vachitengeserana. Hurongwa uhu hwasara kuwana samende nekudya kwevachaita basa,” akadero Zindi.
Mudzimai ane makore makumi mashanu (50 years) Ellis Zindi ava nemwedzi mitatu achiona kuti nherera, vakwegura vachirwara nevakaremara vawana kudya asi arikudawo rubatsiro kune vakasununguka nekuti varikuda rubatsiro urwu vari kuwedzera zuva nezuva kuburikidza nekuziva kuti kune kurikupiwa rubatsiro. Anoti hatigone kutaurira vanhu kuti vakwana ivo vachishaiwa kwekuwana rubatsiro kumwe, saka chiripo ndechekuti vawanirwe zvikwanisiro.
Zindi mabasa ose aka kuti areruke akavamba Elsie Princess Zindi Foundation Trust (EPZ Foundation Trust) akapa basa murume anonzi Biggie Mutambara kuti awone nezve kufambiswa kwemabasa ose aya ekusumudzira nharaunda yake pamwe nekubatsira hama neshamwari, akamutengera chifambiso kuti basa rireruke.
← Gov launches initiative to empower women & girls in Africa
LOVEDALE TVET COLLEGE STUDENTS PROTEST OVER MISSING R12.5M →